I-Semalt: Indlela yokwenza i-Spot kwaye uyivimbele i-Google Analytics Referral Spam
Kwi-shishini elincinci, akukho nto ingcono kunokuba ungene ngemvume kwi-akhawunti ye-Google Analytics kwaye ubone ezininzi zezithuthi eziza kuzo. Uya kuvuyela ukwazi ukuba iwebhusayithi yakho ifumana imibono eyahlukeneyo kwaye ingenako ukuvavanya ingaba le ntengiso iyinyani okanye ayikho. Ukuba awunayo i-media ye-social presence okanye ungayenzanga i-SEO ngokufanelekileyo, ngoko kukho amathuba ukuba ube yixhoba le-Google Analytics yokudlulisa ugaxekile. Hlola ngokucopheleleyo ukuba uye wavelisa i-backlinks ngokufanelekileyo okanye cha - black and silver headpieces. Kwaye ukuba ungenayo i-backlinks kwaye usenokuba nemibono emininzi, ukuhamba kwendlela yakho yonke into iyinyani kwaye ayikho imthethweni.
uLiza Mitchell, uMphathi weNtengo kaMthengi we-13 (Semalt , uyazi indlela yokulwa nokuthunyelwa kogaxekile kunye nokwabelana ngeengxaki ezithile.
Ugaxekile lweGoogle Analytics lungaphezulu nje kokuphalaza okudakisayo xa kuziwa ekusebenzeni ishishini ixesha lokuphila. Iibhokhwe zinokukunceda ukukhwela indawo yakho, kodwa awukwazi ukufumana nayiphi na into yokuthengisa okanye engenayo kwi-AdSense. Ngaphezulu, awukwazi ukufumana inzuzo kwiinkonzo zokulandelela zeGoogle njengoko uhlaselwa yi-analytics spam. Oku kungenza iimpembelelo ezinzulu kwiinkcukacha zakho ezibonwayo, ukuvimba imimiselo kunye neepateni zesayithi lakho, kwaye ufumane ipesenti yeepesenti ezingeniso. I-botstics i-Analytics iyakwenza kwaye iyenzeka eninzi enkulu engenakukwazi ukujongana namashishini amancinci..Umzekelo, ukuba ufumene ubuninzi beempembelelo kunye neembono ngeliveki, kwaye awuzange wenze naluphi na uhlobo lwe-SEO, ngoko uyilwaphulo yale mbandela, kwaye kufuneka ilahlekelwe ngokukhawuleza.
Ukubhekisa ukuthunyelwa kogaxekile
Ezinye zewebhusayithi ezigaxekile zenza kube lula ukuba uzibonele, ezifanelekileyo- seo -offer, 100dollars-seo, kunye nezifanayo. Kulula ukuzibona kuba ii-URL zazo zikhoyo kwi-intanethi. Ukuthenga iinkonzo ze-SEO ukusuka kwinkampani ethembekileyo kukuphela kwendlela yokuphila kwakho kwi-intanethi. Ukuba unomthengisi wedijithali, mcele ukuba abone ukuthunyelwa kogaxekile kwaye alahlekise ngokukhawuleza. Iiwebhsayithi ezinobungozi zivame ukuba zivumelekile, kwaye unokuzifumana ngezikhonkco ezingabonakaliyo kunye nama-imeyli amanga. Ukuba umntu ekubambisa nge-imeyile, ekucela ukuba ukhethe iikhonkco ezibonelelwe zona, kufuneka uzigcine kude nabo. Ngelishwa, i-Analytics spam yinto eyahlukileyo kwaye yinkimbinkimbi ngakumbi ukuba ibone ukudluliswa kogaxekile. Nanini na xa ubona iziboniso ezivela kwi-freemoneyonline okanye kwiwebhsayithi ezifanayo, kungcono ukuvalela iifestile phantsi uze ucime i-cache yakho.
Ukuyeka ukuthunyelwa kogaxekile
Emva kokuba ufumene ugalelo logalelo, isinyathelo esilandelayo kukuba ubenqande ukukhupha iingxelo zakho ze-Google Analytics. Iifayile zilula iindlela zokuziyeka. Unokwenza amanxeba amaninzi kunokwenzeka ukukhusela ukutyekiswa kogaxekile ekubeni kubhalwe kwi-Google Analytics. Ngenye indlela, unokufumana iimbonakalo ezingenakuzingelwa ezivumela isayithi lakho ukuba lifumane kuphela izithuthi ezisemthethweni. Uhlolo lokuhlola, ngakolunye uhlangothi, ikopi yeembono ezingabonakaliyo apho ukhululekile ukufaka izihlungi ezahlukeneyo kwiimvavanyo zakho zokuvavanya. Okokugqibela kodwa kungengona mncinci, unako ukukhetha inketho yokujonga i-master ehlola iimfayile zakho kwaye isebenze ngokuzenzekelayo ukwenza imisebenzi yakho.